Gabadh Soomaali ah oo uu xirey Donald Trump oo la sii daayay | Gaaloos.com
Home » galmada » Gabadh Soomaali ah oo uu xirey Donald Trump oo la sii daayay
Gabadh Soomaali ah oo uu xirey Donald Trump oo la sii daayay
Haweeneey Soomaali ah iyo labadeeda caruur oo ku xirneyd garoonka Dallas ee dalka Maraykanka iyada oo kasoo laabatay dalka Kenya oo ay fasax ku gaartay ayaa la siidaayay kadib markii ay maxkamad sidaasi go’aamisey.
Gabadh Soomaali ah Maraykanka
Waxaa loo xirey amar uu dhawaan soo saaray madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo ahaa in dadka aanan heysanin dhalashada Mareykanka, xitaa haddii ay heystaan kaarka cagaaran in aysan dalka dib ugu soo laaban karin mar haddii ay u safraan dalka dibadiisa.
Muddo 20 saacadood ayay ku xayirneed garoonka Dallas, iyada oo aanan la siinin wax cunto ah, waxaana loo sheegey in labadeeda caruur lagu wareejinayo aabahood oo ku sugnaa Minnosota, iyadana lagu celinayo Afrika .
Waxa ay ka mid tahay boqolaal dad soogalooti ah oo Maraykanka ku noolaa , islamarkaasina sugayay sharciga rasmiga ah in ay helaan, balse sababo kala duwan dalka oga safray, kuwaasi oo markii ay soo laabteen lagu xirxiray garoomada Maraykanka.
Balse xaakim ku sugan magaalada New York ayaa soo saaray amar Trump looga joojinayo in uu ficiladaasi ku dhaqaaqo.
Dalka Mareykanka oo dhan ayaa laga banaanbaxayaa, waxaana la dhaleeceynayaa talaabooyinka cusub ee uu Trump qaaday.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay illaa 7 dal oo uu Trump mabnuucey in ay xitaa fiiso kusoo galaan Maraykanka muddo 120 maalmood ah, sababtuna wuxuu ku sheegey in ay halis ku yihiin amniga Maraykanka.
Title: Gabadh Soomaali ah oo uu xirey Donald Trump oo la sii daayay